मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारी, को आऊट, को इन ओली मन्त्रीमण्डलमा? - Jagaran Post
Home/राजनीति/मन्त्रीमण्डल हेरफेरको तयारी, को आऊट, को इन ओली मन्त्रीमण्डलमा?
२०७६ मंसिर ४, बुधबार २२:०० गते
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा बिहीबार हेरफेर गर्ने भएका छन्। सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन र नयाँ नेताहरूलाई पनि अवसर दिन भन्दै ओलीले कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेका हुन्।
रिक्त हुने मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिई बिहीबार नै शपथ गराउने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार नै यस विषयमा निर्णय लिने भन्दै मन्त्रीलाई कार्यक्रम नराख्न र टाढा कतै नजान निर्देशन गरेका थिए।
बिदा हुने र नियुक्त हुने मन्त्रीका विषयमा नेकपा सचिवालय बैठकले बुधबार निर्णय लिने बताइए पनि हुन सकेन। ‘सामान्य सैद्धान्तिक छलफलबाहेक सचिवालय बैठकमा यस विषयमा कुरा भएन,’ सचिवालयका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री र अध्यक्षले यस विषयमा ठोस निर्णय लिनुभएको होला। उहाँहरूले छलफलमा ल्याउनुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्नुहोला।’
हेरफेरका क्रममा तत्कालीन माओवादीतर्फका २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री तथा एमालेतर्फका एक मन्त्रीलाई बिदाइ गर्ने विषयमा सहमति जुटे पनि अन्य मन्त्रीका विषयमा छलफल बाँकी छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी बिदाइ हुने सूचीमा छन्। प्रधानमन्त्री ओली महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री थममाया थापालाई पनि पदमुक्त गर्ने तयारीमा छन्।
ओलीले सुरुमा ५ देखि १० जनासम्म मन्त्री फेर्ने तयारी गरे पनि अन्य मन्त्रीका विषयमा निर्णय भइसकेको छैन।
ओलीले घनश्याम भुसाल, वसन्त नेम्बाङ, हृदयस त्रिपाठीदेखि मोति दुगडसम्मलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन्। पूर्वमाओवादी समूहले रामेश्वर राय यादव र लेखराज भट्टलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ।
ओलीले पूर्वएमालेतर्फबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा नेताहरू विष्णु पौडेल, वामदेव गौतम र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग परामर्श गरेको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
बुधबार नै शीतल निवासमा मन्त्रीको शपथका लागि तयारी भए पनि त्यो सम्भव हुन सकेन । बिहीबार मात्र शपथ हुने जानकारी शीतल निवासमा गराइएको छ ।
२०७७ असार १०, बुधबार ०७:५४ गते
बैशाख २५ गते नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बस्ने
२०७७ बैशाख २०, शनिबार २२:२२ गते
एनआरएनए निर्वाचन : नतिजा अन्तिम चरणमा
२०७६ कार्तिक १, शुक्रबार १०:०७ गते